ZimPF Implodes •Mujuru Expels Mutasa, Six Others •Mutasa, Gang Counter Expel Mujuru
In this picture collage, Zimbabwe People First leader Dr Joice Mujuru announces the expulsion of her party’s founding members at a Press conference in Chisipite, Harare, yesterday, while ZimPF members (from left) Messrs Kudakwashe Bhasikiti,Rugare Gumbo, Didymus Mutasa and Engineer Munacho Mutezo field questions from the media at a separate Press conference in Harare yesterday. — (Pictures by Believe Nyakudjara and Kudakwashe Hunda)
THE troubled Zimbabwe People First party led by Dr Joice Mujuru imploded yesterday, with rival factions announcing expulsions and counter-expulsions as the party’s heavy drubbing in the Bikita West by-election and differences over aligning with MDC-T took their toll on the grouping of mostly Zanu-PF rejects. First off the block was interim party leader Dr Mujuru who convened a Press conference at her Chisipite house to announce the expulsion of the core of her party’s council of elders, Messrs Didymus Mutasa, Rugare Gumbo, Kudakwashe Bhasikiti, Munacho Mutezo, Claudious Makova, Lucky Kandemiri and Dr Margaret Dongo whom she accused of plotting a “coup d’état” and being Zanu-PF infiltrators bent on destabilising the fledgling party.
Sources close to developments said the Mutasa group had been working to drop Dr Mujuru and replace her with businessman Mr Ray Kaukonde as the interim ZimPF president in the wake of a deepening crisis in ZimPF arising from poor leadership, the party’s heavy drubbing in the Bikita West by-election, and differences over entering into a coalition with the MDC-T.
While the choice of Kaukonde was said to have been motivated solely by the belief that he was rolling in dollars, it also pointed to the work of western capital and the legacy of differences between Kaukonde and the late General Solomon Mujuru.
In her address to journalists at her residence in Harare, Dr Mujuru hinted that more heads were going to roll in the troubled party. “As a party, we have decided to take stern measures against elements determined to stall the progress that the party has been making,” she said.
Without providing any shred of evidence, Dr Mujuru blamed Zanu-PF for her actions.